laacibfm.com » Bye…Bye: Solskjaer Oo Ciyaartoygiisa U Sheegay Waqtiga Ay Man United Shaqada Ka Caydhinayso Iyo Shayga Kaliya Ee Uu Ka Codsaday
Bye…Bye: Solskjaer Oo Ciyaartoygiisa U Sheegay Waqtiga Ay Man United Shaqada Ka Caydhinayso Iyo Shayga Kaliya Ee Uu Ka Codsaday
Tababaraha Manchester United ayaa sii xidh-xidhay shandaddiisa ka hor inta aanay gaadhin maalinta berri oo ay kooxdiisu kusoo dhoweynayso Tottenham garoonka Old Trafford.
United oo 18 dhibcood ka heshay 14 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah xili ciyaareedkan, 22 dhibcoodna ka hoosaysa kooxda hoggaanka haysa ee Liverpool ayaa waxay diiwaangashay rikoodhkeedii ugu xumaa tan iyo sannadkii 1988-89 markaas oo ahayd xilligii uu Sir Alex Ferguson xilka qabtay, kooxduna usoo guuxaysay guulaha xidhiidhka ah iyo kacaanka magaca weyn u sameeyey ee soddonka sannadood u horseeday farxadda, dhaqaalaha iyo koobabka.
Man United oo xili ciyaareedkii hore shaqada ka eriday Jose Mourinho waxay Arbacada la ciyaaraysaa Tottenham oo uu hoggaaminayo macallinkeedaas hore, waxaana natiijada kasoo baxdaa ay go’aamin doontaa mustaqbalka Ole Gunnar Solskjaer oo sababsan doona Mourinho.
Sida uu qoray wargeyska tababare Solskjaer waxa uu u sheegay ciyaartoyga kooxdiisa in maamulka Manchester United ay shaqada ka eryayaan haddii ay Tottenham ka badiso.
Ole waxa uu la wadaagay ciyaartoyga kooxdiisa, sida uu usoo gaabtay mustaqbalkiisa Manchester United ee uu filayey inuu noqdo mid dheer, waxaanu u sheegay in iyagu ay u hayaan haddii shaqada laga caydhinayo iyo haddii uu sii joogayo, taas oo ay ku go’aamin karayaan guul ay ka keenaan kulanka Tottenham.
Waxa uu ka codsaday ciyaaryahannada in ay guul keenaan si ay u badbaadiyaan, laakiin taas ayaa ah mid aan damaanad lahayn oo ay wax walba dhici karayaan.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska The Sun waxa uu sheegay in tababarihii laba toddobaad ka hor laga eryey Tottenham ee Mauricio Pochettino uu kusoo waajahan yahay Old Trafford oo uu noqonayo ninka beddelaya Solskjaer.